Gabdhaha Caadiga ah Jacquard Kirismaska ​​Soosaarayaasha iyo alaableyda | Haiermei
Lambarka Qaabka: HRMGS01
Gabdhaha caadada ah funaanad jilicsan oo jilicsan.
Funaanad cas, Waxay kaa dhigeysaa inaad u egtahay damaashaad aragtida koowaad.waana runtii qurux badan.dhow in funaanadan loo sameeyo caruurta sidaa darteed waxaan sameynay adeegsiga cudbi saafi ah, dabcan, maadada, waa nalagu qaabeyn karaa si waafaqsan codsigaaga. Iyo midab, sidoo kale waad beddeli kartaa waxaad rabto. waxaan sameyn karnaa iyadoo ku saleysan dalabkaaga. wixii faahfaahin ah goyn hoose * gogol qoorta iyo goynta qoorta, waxaan sameynaa 1 * 1 RIB, iyo balastarka, waxaan si toos ah uga soo laabaneynaa jirka, oo waxaan ku , badhanka, sidoo kale waad beddeli kartaa waxa aad rabto, sababahan awgeed haddii loogu talagalay carruurta, waxaan ku darnaa qoorta qoorta qoorta si loo ilaaliyo. marka la isku daro, waxaan qabannaa waxyaabo la isku qurxiyo, qaabkani waa uun waan dhammaynay, waad bixin kartaa qaabka aad rabto, waxaan ku sameyn karnaa adiga. laabta hore, waxaa jira hal balastar ah. loogu talagalay qayb qayb, haddii aad rabto inaad si toos ah u tolmo, sidoo kale waa ku habboon tahay, mashiinkeena kumbuyuutarka ayaa la kulmi kara.
Dharka funaanadaha carruurta, Waxaan leenahay shuruudo adag oo tayo leh, tan awgeedna waxaan leenahay koox gaar ah oo QC ah oo mas'uul ka ah tan, uma baahnid inaad ka walwasho walxaha iyo tayada dharka funaanadda, barta aan habboonayn ee kaneecada waa annagu waxaan nahay soo saare, qiimahayagu aad ayuu Tartanka.hope si aad u gaarsiiso alaabada ugu fiican uguna nabdoon ee macaamil kasta.Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir, adoo sugaya su'aalahaaga.
Hore: Deyr Jiilaal Jiilaal Jiilaal Jiilaal Kirismas ah oo Faa'iido Leh
Xiga: OEM Factory Jumlada Fashion Knitted Cotton Pullover Gabdhaha funaanad
Gabdhaha Jumlada Gabdhaha Dharka Cufan
Gabdhaha Warshad Jumlada ah Carruurta Cardigan Dhididka
Casaannada Wadnaha Cas Gabdhaha Gulufka
OEM Girl O-Neck Knitted Ruffle funaanad
Qeybiye Custom Custom Dayrta Girl Cotton Knitt ...